धर्मले पाप भनेपछि समलिंगी जोडीले गरे यस्तो निर्णय - MitiniNews :- Nepali News Portal | Information
Home/आत्मकथा/धर्मले पाप भनेपछि समलिंगी जोडीले गरे यस्तो निर्णय
स्वस्तिका परियार, लेसवेयन
मेरो नाम स्वस्तिका परियार हो । २०५७ साल जेष्ठ ६ गते स्याङजा जिल्लामा बुवा बुद्धीमान परियार र आमा मनरुपा परियार को कोखबाट मेरो जन्म भएको थियो । म परिवारको साइली छोरी थिए । हाम्रो परिवार सामान्य नै थियो । आम्दानीको श्रोत बैदेशीक रोजगारी थियो । बाबाको बसाइ विदेश, उहाले कमाएर पठाउनु भएको पैसाले घरको चुलो बल्ने गर्दथ्यो । बाबा, ममी, ५ जना दिदी बहिनी र १ जना भाइ गरी हाम्रो ८ जनाको परिवार रहेको थियो । परिवारको सबै भार उहा मानै थियो । जेनतेन हाम्रो दैनिकी चल्ने गर्दथ्यो ।
परिवार भन्दा म केही भिन्न थिए । पढ्नु पर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडी बढने गर्दथे । सानै देखि शालिन स्वभावकी म खासै चकचके थिइन । सबैसंग मिलनसार भएर बस्ने घुलमिल गर्ने स्वभावकी थिए । घर नजिकै रहेको श्री धुव्र ज्योती माध्यमिक विद्यालय बाट एसएलसी दिएको थिए र ११ पनि त्यही भर्ना गरी आफ्नो पढाइलाई अगाडी बढाउदै गएको थिए । केटा साथी खासै थिएन मेरो प्राय केटी संगै बोल्ने, घुम्ने र हिड्नेमात्र बानी थियो । धेरै बोल्न मन नपराउने अलि फरक खालको थिए । पढाइ राम्रो नै थियो । साथीहरुसंग राम्रो सम्बन्ध हुन्थो । सबै जनासंग मिलनसार भएकोले सबैको प्यारी थिए म ।
नृत्यमा चासो राख्ने म केही कार्यक्रम हुने बितीकै भाग लिएर आफ्नो कला प्रस्तुत गरिहाल्थे र सानोतिनो उपहार हातमा लिएर मात्र फर्कन्थे । एकदिनको कुरा हो, पारिवारीक समस्याको कारणले हामीले आफुबसेको घर अकस्मात छोडेर अन्यन्त बसाइ सरनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसदिन बज्रपात भएजस्तै भयो । हामी सबैको जिन्दगीमा उथलपुथल भयो । यसको प्रत्यक्ष असर मेरो पढाइमा पनि परयो । कसरी अगाडी बढ्ने के गर्ने भन्ने विषयमा म मा अन्यौलता थियो ।
बुटवल जस्तो नया ठाउ के गर्ने ? कसलाई गएर सहयोग माग्ने केही थाहा थिएन । बिस्तारै दिनहरु बित्दै गयो र सङघर्ष गदै गर्दा एउटा सानो कोठा खोजेम र सपरिवार बस्न थालेम । ठाउमा पुन संघर्ष हाम्रो चलिने रहेको थियो । सबै समस्या समाधानकै लागी भएपनी हामीले पूर्ण रुपमा नभएपनि धेरथोरै घरको समस्या टार्नको लागीे काम गर्ने निर्णय गरयौ ।
दिदी र मैले त्यही नजीकैको चाउचाउ फयाक्टीमा मामाको सहयोगले काम गर्न थाल्यौ जसबाट परिवारमा पूर्ण रुपमा नभए पनि केही मात्रामा सहयोग हुन पुग्यो ।
कामको सिलसिलामा एकजना केटी साथी संग चिनजान भयो । खासै कोहीसंग त्यती नबोल्ने म अचानक उनको हरेक कुराहरु राम्रो लाग्न थाल्यो । हामी संगै काम गरथ्यौ । उनी हिन्दु धर्मकी थिइन म भने क्रिस्चेन धर्म मान्थे । हाम्रो धर्म एक नभएपनि कुरा र बिचार भने दुबैको मिल्थ्यो । हामी घण्टौ संगै फुर्सदमा दुःख अनि सुखका कुराहरु एक अर्कालाई साटासाट गरथौ ।
स्वस्तिका परियार र चादनी कार्की, लेसवेयन
एकदिनको कुरा हो उनले मलाई प्रेम प्रस्ताव राखे । म छागाबाट खसे जस्तै भए कि केटीले केटीसंग प्रस्ताव राखेको देखेर । के गरेको होला? किन यस्तो सोचेको होला? म आफैले आफैलाइ के हो भनेर प्रश्न गर्ने अवश्थामा पुगे ? केटासंग मेरो कुरा हुदा खासै सामिप्यता नपाउने मेरो मन, केटीको कुराले मलाई आकर्षित गराएको देखेर म छक्क हुनपुग्ये । मैले उनको बारेमा बुझे उनी लेसवेयन रहेछन् । आफु पनि लेसवेयन रहेछु भन्ने कुरा मैले त्यति बेला थाहा पाय । आफनो पहिचान थाहा भयो । मलाई बाच्न मन लागेन के भयो ? म के हुन पुग्य ? कसरी यस्तो भयो ? यस्तो कुराले मलाइ खादै गयो ।
आफ्नो कुरा कसैसंग भन्न अनि सोध्न सक्ने अवस्थामा थिइन र अन्यतमा मैले आत्महत्या गर्ने निर्णय गरे । मर्न हिडेको थिए तर मेरो साथीले थाहा पाए र सम्झाउन थाले जब मैले बुझे यो कुनै पाप होइन रहेछ मेरो धर्मले मलाई अन्धकारमा राखेको कुरा थाहा पाए र मैले चादनी जसले मलाई प्रेमप्रस्ताव राखेका थिए मैले उसको प्रेमप्रस्ताव स्विकार गरे ।
मलाई धेरै कुरा थाहा हुदै गयो तर मैले परिवारमा भन्न सकेको थिइन् । तर मन मनमा लेसवेन हु भनेर मलाई डर भन्दा नि गर्व लाग्दै गयो । हामी एक अर्काको मायामा डुब्न पुग्यौ । हामी दुइको दिनहरु राम्रो चल्दै गयो । अरु कसैको वास्ता लाग्दैन थियो । हामी मायामा संसार भुलेर बस्न पुग्यो ।
अचानक मेरो बारेमा घरमा थाहा भयो । के गरेको यस्तो ? केटी भएर केटी संग माया गर्ने ? हाम्रो धर्मले दिनैन भनेर म माथी एकदम मानसिक तनाव हुदै गयो जसबाट मैले बुटवल छाड्ने निर्णय गरे र मेरो यात्रा काठमाण्डौ तिर लाग्यो ।
म अन्यौलमा थिए । कहा जाने ? के गर्ने ? तर मलाई साथीले मितिनी नेपालको बारेमा बताय म जस्तो यौनिक तथा लैगिंक अल्पसङख्यक समुदायको ब्यक्तिहरुको लागी काम गर्ने संस्था जसले हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा थाहा पाए हामी त्यहा गयौ ।
मितिनी नेपालमा आएर आफ्नो सबै समस्याहरु ब्यक्त गरे र मितिनी नेपालको अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र सबैकुरा सम्झाइ बुझाउनु भयो । मैले म जस्तै अन्य यसै समुदायका अरुलाई भेटे जसबाट म मा थप हिम्मत अनि हौसला प्रदान भयो । हाल म मितिनी नेपालमा हामी जस्तै लेसवेनहरुको हक अधिकारको लागी काम गदै आएको छु । आगामी दिनमा यसरीनै अगाडी बढ्नेछु ।
मेरो जिवनको पुनः जन्म मेरो पहिचानले गराएको छ । अब मेरो जिवनको सङघर्ष र नया यात्रा मितिनी नेपालबाट शुरु भएको छ । आगामी दिनमा म जस्तै कोही पनि आफ्नो धर्मको कारणले आत्महत्या गर्ने जस्तो निर्णमा नपुगोस । यो कुनै पाप होइन ? नत बनायर बन्ने कुरा हो ? जन्मसिद्ध हुने कुरालाई हाम्रो समाज, परिवार र धर्मले किन पाप भनेर उल्लेख गदै छ । अब हामीले डटेर समाजमा भ्रम फैलाउनेको बिरुद्धमा सङघर्ष गर्नु पर्नेछ । हरेक क्षेत्रमा समानताको माग सरकार संग गर्दछु ।
आफ्नो पढाइलाइ निरन्तरता दिदै अगाडी बढ्नेछु । आफ्नो घर परिवारले सहज स्विकारुन । नकारात्मक तरिकाले हेर्ने अनि बुझने नगर्नुहोला । यो कुनै पाप होइन । जन्मजात हुने कुरा हो । त्यसैले आगामी दिनमा अरु समलिंगीहरको बारेमा काम गदै अगाडी बढ्नेछु । घर परिवारले मलाई बुझेर एकदिन अवश्य स्विकारनु हुन्छ भन्ने सकारात्मक आशामा बसेर अगाडी बढ्दै छु
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक सम्बन्धि जानकारी
५ आश्विन २०७६, आईतवार ०१:४४
अधिकारको लडाईमा निक्कै भौतारी रहेका एक ‘ट्रान्सम्यान’
१६ बैशाख २०७६, सोमबार १०:१७
१४ असार २०७६, शनिबार ०२:४४
केटी केटी बिचको अनौठो प्रेमले लियो नयाँ मोड,परिवारमा रुवाबासी
२४ चैत्र २०७५, आईतवार ११:४४
के भन्छन् त एलिस आफ्नो बारेमा
१६ असार २०७६, सोमबार ०६:२३
पहिलो पटक मिडियामा केटि प्रेम जोडीको दिदि ll नराम्रो Comments ले गर्दा परिवारमा झगडा
२५ चैत्र २०७५, सोमबार ०८:५२
सकारात्मक सोचका साथै परिवर्तनशील विचारहरु